UMegan Maxwell wabelana kuNubico okhiye bokuphumelela kwakhe emcimbini ngeFacebook | Izincwadi Zamanje
UMegan maxwell, umbhali wezothando waseSpain odumile, futhi ongomunye wababhali abakhulu bamanoveli othando eSpain, wabelane nabalandeli bakhe ngeNubico's Facebook okhiye bempumelelo yakhe emhlanganweni wedijithali nalapho eveze khona ezinye izimfihlo ezingenakulibaleka.
Umbhali waseSpain onemvelaphi yaseJalimane uthole indawo eqophelweni eliphezulu lababhali abathengisa kakhulu, futhi ube yintokazi enkulu ye- inoveli evusa inkanuko nezothando eSpain. Kuthathwa njenge owesifazane waseSpain okwazile ukukhipha isihlalo sobukhosi Ama-shades angama-50 empungaUMaxwell uzizwa ejabule uma eqhathaniswa no-EL James, yize evuma ukuthi unezinye izinkomba ezifana noJulie Garwood noRachel Gibson.
Isihluthulelo sempumelelo yayo wukuqina okulandisayo lapho kuhlangana khona abalingiswa bayo, kanye nezindaba zayo ezigcwele imizwa, ezothando, ezokuzijabulisa nombhalo ohlekisa kakhulu ohlanganisa umugqa wokuqala. Kepha ubuye waqonda umhlaba wokuxhumana nabantu kanye nezakhiwo zedijithali zezincwadi zakhe njengezikhiye zokondla ukufundwa kwakhe. Empeleni, izincwadi zakhe ziphakathi kwezifundwa kakhulu ngefomethi ye-ebook futhi unenani elikhulu labalandeli ezinkundleni zokuxhumana, iziteshi ezenze udumo lwakhe lwaba yisikhulumi.
UMaxwell wabelane ngombono wakhe ngalolu hlobo futhi ubikezela ikusasa elihle.
Inoveli yothando ibilokhu ikhona futhi isazoqhubeka ikhona. Ngokubona kwami ​​enye yezinkinga lolu hlobo lohlobo lwayo bekungukumbozwa kwezincwadi, obejwayele ukuba mubi. Ngenxa yoshintsho ebesilokhu silunikeza kumakhava, siqaphele ukuthi abantu bayakhuthazeka ngokuya ngokuthanda ukufunda ngokuvusa inkanuko.
Ukuya ocansini ezincwadini bekuyindaba engathandeki kuze kube yiminyaka embalwa eyedlule, kepha namuhla lokhu kucatshangelwa sekuguqukile. Kanjalo nezinkolelo-ze zobulili zabesifazane. UMaxwell ukholelwa ukuthi ababhali bayakwazi ukwakha abalingiswa besifazane umphakathi okhomba ngabo; abesifazane abanesimo esivula imicabango yabesifazane bekhulu lama-XNUMX. Lokhu ngokusho kombhali impumelelo yangempela yamanoveli akhe. Uthando aluchaza kumanoveli akhe luthando lwesimanje futhi olusiza ukuxhumana komphakathi nababhali.
Kimi, iPrince Charming ayikho. Ngingomunye walabo abakholelwa ukuthi uthando kufanele luhlale isikhathi eside uma lusazohlala futhi ekugcineni luphele njengama-yogathi. Umsebenzi wami ukubhala ukuqala kwendaba, ngabe basazoba ndawonye ngemuva kweminyaka engama-25? Lokhu angikwazi.
Ngokuqondene nemibono eyeqisayo yabesifazane, uMegan unombono ocacile:
Uyazi? ukuphelela akukho futhi njengoba kusho isikhangiso, uma ungangithandi, ungangibheki! Abantu ngabantu abanamakhilogremu angaphezulu noma amancane futhi kuyihlazo ukuthi abaningi babona lokho kuphela futhi ababoni ukuthi kukhona okunye ngemuva komuntu. Angiyena umodeli ... noma ngubani ongafuni ukungibona akufanele angibheke! Ngamunye unjengoba unjalo futhi SONKE sifanelwe ukujabula.
Umbhali ubonile ukuthi kunzima kuye ukukhetha izintandokazi phakathi kwemisebenzi yakhe noma abalingiswa bakhe, yize bonke abesifazane kumanoveli akhe bephethe okuthile ngaye kumlingiswa wabo. Njengokuzethemba, uMegan unikeze umkhondo: "Ngibathanda bonke ngokufanayo, kodwa kukhona incwadi lapho umlingisi oqavile ebizwa ngokuthi yi-MEGAN. Ngabe kunesizathu?"
Ukugqugquzelwa kwakhe kuvela emculweni nasekuthuleni, futhi uyakugwema ukuthathwa njengombhali wabesifazane.
Lapho ngibhala incwadi ikakhulukazi engizama ukuthi ngiyayithanda futhi uma ngijabule ngomphumela, bese ngiyithumela kumhleli wami. Angibhaleli iphrofayili yomfundi. Ngimane ngibhalele noma ngubani ofuna ukungifunda.
Umbhali ukhombise ithalente lakhe ngokuthola ukuqashelwa emhlabeni wokushicilela, kepha ngenxa yalokhu ungqongqoze eminyango eminingi esendleleni.
Kwakuyiminyaka ecishe ibe ngu-14 lapho ngangingakaze ngicabange ukuphonsa ithawula. Ngihlala ngilwela yonke into ebengizimisele ukuyenza nokwenza ukuthi amanoveli ami ashicilelwe bekungeke kwehluke ”, ngakho-ke elinye lamathiphu akhe kubalandeli bakhe ukubekezela njengesithako sempumelelo yomuntu siqu neyomsebenzi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izwe ledijithali » UMegan Maxwell wabelana kuNubico okhiye bokuphumelela kwakhe emcimbini ngeFacebook